IGraphene ivumela ukukhanya ukufikelela kwizithuba ezincinci njengobubanzi beathom | Iindaba zeGajethi
Uninzi luye lwathetha kwiinyanga nje ezidlulileyo malunga nobukhulu bezinto ezinje ngezixhobo graphene. Injalo imeko, okwangoku, kubonakala ngathi yonke into, ukusuka kwiibhetri ukuya ezingubeni, kungcono ukuba, ngexesha elithile ekwenziweni kwayo, i-graphene isetyenziselwe ukwenziwa kwayo.
Kude lee kuyo yonke le nto, ngaphandle kwento yokuba namhlanje kukho abaphandi abaninzi abasebenza ngeendlela ezintsha zokufumana le nto, iprojekthi apho kutyalwe imali eninzi, inyani kukuba zonke ezi ndaba zinomdla zibonakala ngathi azisoze zize kwintengiso. Ngeli xesha ndifuna sithethe ngeprojekthi entsha, efanayo apho, enkosi ngoncedo lwegraphene, iqela labaphandi likwazile ukwenza ukukhanya kufikelela kwindawo encinci kakhulu kunobude bayo, into engafanelekanga.
1 Enkosi ngegraphene, iqela labaphandi likwazile ukuzisa ukukhanya kwiindawo ezincinci kunobude bayo
2 Ukusetyenziswa kwegraphene kusivumela ukuba sikhokele ukukhanya kwiindawo ezincinci njengeathom
3 Kuya kufuneka sisebenze ukunciphisa ezinye izinto ze-chip ukuze sifezekise izixhobo ezincinci
Enkosi ngegraphene, iqela labaphandi likwazile ukuzisa ukukhanya kwiindawo ezincinci kunobude bayo
Njengoko ebethethile kwezakhe iingxelo UFrank Koppens, umphandi oyintloko wale projekthi nomsebenzi we IZiko leNzululwazi yeFoton yaseSpain:
IGraphene iyaqhubeka ukusothusa: akukho mntu ucinga ukuba ukunciphisa umda kumda we-athomu kunokwenzeka. Iya kuvula iseti entsha yezicelo, ezinje ngonxibelelwano lwe-optical kunye neesenzi kwisikali esisezantsi kwenanometer enye.
Njengoko ubona, kuthathelwa ingqalelo iingxelo ezenziwe nguFrank Koppens, ukukwazi ukuzisa ukukhanya kwezi ndawo zincinci kuvula entsha Intsimi igcwele ngamathuba, ngakumbi kwihlabathi le-elektroniki, iisenzi kunye nezixhobo zokucinga ngekamva. Ngokukodwa, le nto intsha, okanye ubuncinci yile ndlela ichazwe ngayo, inokusikhokelela ekubeni senze iichips zezixhobo zethu zincinci kunezo zisetyenziswa namhlanje.
Ukusetyenziswa kwegraphene kusivumela ukuba sikhokele ukukhanya kwiindawo ezincinci njengeathom
Ukuya kwiinkcukacha ezithe kratya, ndikuxelele ngesiqhelo Ukukhanya akunakugxila kwinqanaba elincinci kunelona linobude bayo, isithintelo esaziwa ngegama lika umda wokusuka. Kude kube ngoku, abaphandi abaninzi basebenza ukoyisa lo mda, nangona izithintelo ezibekiweyo zithetha ukuba kufuneka kusetyenziswe amandla amaninzi.
Ngeli thuba, abaphandi abajongene nokuphuhliswa kwale projekthi basebenzise izinto ezinamacala amabini, ezaziwa ngokuba zii-heterostructures, ukwenza isixhobo esitsha se-nano-optical apho bongeze i-graphene monolayer ukuba isebenze ngokungathi semi-sisinyithi. Enkosi kule ukukhanya kunokukhokelwa ngohlobo lweeplasmonI-Electron oscillations esebenzisana ngamandla nokukhanya kwaye inokusetyenziselwa ukuyikhokela.
Ngamazwi e UDavid alcaraz, Elinye lamalungu eqela lophando elisebenza kuphuhliso lwale projekthi:
Kuqala besikhangela indlela entsha yokonwabisa i-graphene plasmons. Endaweni yoko, safumanisa ukuba ukuvalelwa kwakomelele kunakuqala kwaye ilahleko eyongezelelweyo incinci. Ke sigqibe kwelokuba siye kumda we-athomu ngeziphumo ezimangalisayo.
Kuya kufuneka sisebenze ukunciphisa ezinye izinto ze-chip ukuze sifezekise izixhobo ezincinci
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukukwazi ukulawula ukukhanya kwisitishi esingaphantsi kwenanometer ubukhulu yinkqubela phambili eya kuthi ivumele abantu yenza izixhobo ezincinci kakhulu. Icala elisezantsi koku kukuba utshintsho oluncinci olunokubonakalayo, iisenzi kunye neeteknoloji kuya kufuneka ziphuhlisiwe ukufezekisa oku.
Umsebenzi wokuphuhlisa i-transistors esekwe ekukhanyeni sele iqhubeka. Nje ukuba indlela yokuvelisa ifumaneke, iya kuba lithuba labavelisi, ekufuneka bayiphumeze ukuze bafezekise pakisha ii-transistors ezininzi kwindawo enye, ke ukuphucula ukusebenza kweetshipsi zangoku, okanye ilingane inani elifanayo leetransistors ezifunyenwe kwi-chip namhlanje ukunciphisa ubukhulu bayo yalo
Más información: inzululwazi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » IGraphene ivumela ukukhanya ukufikelela kwiindawo ezincinci njengobubanzi beathom
Itikiti lijonge ukulahla amatikiti kunye nokumiliselwa kobuso